नयाँ कार्यान्वयन औषधि लिन्छ 10 मिनेट अमेरिकी हत्यारा मार्न - समाचार नियम
मृत्यु दण्ड (फोटो क्रेडिट: विकिपीडिया)
यो नोभेम्बर 30, 2009 फोटो को कार्यान्वयन कोठामा देखाउँछ “मृत्यु घर” Lucasville मा दक्षिणी ओहियो Correctional सुविधा मा, ओहियो
एक अमेरिकी हत्यारा संघर्ष र कम से कम लागि हावा लागि gasped 10 उहाँले एक लामो समयसम्म कार्यान्वयन मा मृत्यु दिइयो मिनेट रूपमा विवादास्पद नयाँ दबाइ ककटेल प्रयोग, साक्षी अनुसार.
53 वर्षीया डेनिस McGuire को कार्यान्वयन मा कोलम्बस डिस्पैच अखबार वर्तमान लागि एक पत्रकार को ओहियो हत्यारा गरे भनेर रिपोर्ट “snorting र choking” उहाँले पासोमा परे रूपमा सुनिन्छ.
ओहियो अधिकारीहरु कि एएफपी भन्नुभयो McGuire, मा मृत्युदण्ड सुनाइसकेको 1989 एक जवान गर्भवती महिला को बलात्कार र हत्या लागि, मा मृत घोषणा गरिएको थियो 10:53 छु (1553 GMT).
कार्यान्वयनबाट साक्षी गर्ने पत्रकार को घातक इंजेक्शन प्रयोग लागूपदार्थ प्रबन्ध गर्न थालेका थिए 24 मिनेट Lucasville मा जेलको मा पहिले.
नयाँ ओहियो प्रोटोकल अन्तर्गत, McGuire को बेहोशि औषधि midazolam र analgesic hydromorphone comprising एक ककटेल प्रयोग कार्यान्वयन थियो, पहिले संयुक्त राज्य अमेरिका मा कहिल्यै संयोजन.
नयाँ कार्यान्वयन प्रोटोकल भयो ओहियो र मृत्यु दण्ड राख्ने भनेर अन्य अमेरिकी राज्य पछि barbiturates बाहिर चलिरहेको थाले युरोपेली निर्माताहरु तिनीहरूलाई आपूर्ति रोकियो गर्दा.
McGuire वकील कार्यान्वयन को विधि विरोध गरेका थिए, हत्यारा को रूपमा चिनिने घटना मा asphyxia को मर्ने भन्दै “हावा भोक,” अमेरिकी संविधान अन्तर्गत निषेधित क्रूर र असामान्य सजायको क्रमबद्ध inflicting.
तर अपील, जो अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सबै बाटो लागे, अस्वीकार गरेका थिए.
ओहियो मा एक संघीय न्यायाधीश, ग्रेगरी फ्रस्ट, भने “अदालत अघि प्रमाण McGuire गंभीर दुखाइ अनुभव हुनेछ भनेर एक पर्याप्त जोखिम प्रस्तुत गर्न असफल भयो।”
बिहीबार कार्यान्वयन साक्षी गर्ने पत्रकार भने McGuire उहाँले मृत्युदण्ड थियो suffocating जस्तो देखियो.
संवाददाता को पूल अनुसार, ओहियो मृत्यु दण्ड मा पुन शुरू देखि यो सबैभन्दा लामो कार्यान्वयन थियो 1999.
“बारेमा 10:33 छु, McGuire संघर्ष र हावा लागि ठूलो स्वरमा gasping सुरु, snorting बनाउने र कम से कम लामो कि ध्वनि choking 10 मिनेट, आफ्नो छाती heaving र आफ्नो मुट्ठी clenched संग,” को कोलम्बस डिस्पैच रिपोर्ट.
“गहिरो, rattling ध्वनि आफ्नो मुखबाट उत्पन्न. पछिल्लो धेरै क्षणहरू उहाँले मृत उच्चारण अघि, उहाँले अझै पनि थियो।”
मृत्यु दण्ड विशेषज्ञहरु McGuire मृत्यु को विवरण मा चासो voiced, यो थियो जो कार्यान्वयन को एक विधि सङ्केत भन्दै “भीषण र समस्याग्रस्त।”
“डेनिस McGuire कार्यान्वयन को लम्बाइ र डरलाग्दा वर्णन को प्रकाश मा, अन्य राज्य अमेरिका मा रिपोर्ट घातक इंजेक्शन जटिलताहरुलाई दायरामा बाहेक, यो कहिल्यै भएको छ भन्दा यो देशको घातक इंजेक्शन प्रक्रिया थप भीषण र समस्याग्रस्त छ जस्तो देखिन्छ,” दबोरा Denno, व्यवस्था Fordham विश्वविद्यालय स्कूल देखि, इमेल मा एएफपी भन्नुभयो.
माया Foa, को Reprieve गैर लाभ समूह मा मृत्यु दण्ड टोलीमा निर्देशक, बेवास्ता विशेषज्ञ सल्लाह आरोप ओहियो अधिकारीहरूले.
“ओहियो यसरी मानिसहरूलाई प्रयोग गरिरहेका भनेर विशेषज्ञहरु बिताएर चेतावनी दिए थियो तिनीहरूलाई गम्भीर दुःख पैदा जोखिममा, र प्रमाण यो बाहिर सार्ने गरिएको सुझाव,” Foa एक बयान मा भन्यो.
“कसरी धेरै botched executions हामी executioners गिनी सुँगुरहरु रूपमा मानिसहरूलाई प्रयोग गर्न बन्द गर्नु अघि हेर्न चाहिन्छ?”
बिहीबार कार्यान्वयन गर्ने दोषी को दुःखकष्ट परिणाम देखा पर्नुभयो जो नयाँ उत्पादनहरू प्रयोग अमेरिकी अधिकारीहरूले यस वर्ष बाहिर दोस्रो थियो.
जनवरी मा9ओक्लाहोमा मा, दोषी हत्यारा माइकल ली विल्सन उहाँले महसुस सक्छ भने आफ्नो “सम्पूर्ण शरीर बलिरहेको” उहाँले मृत्युदण्ड थियो.
विल्सन pentobarbital सहित लागूऔषधको मिश्रण प्रयोग कार्यान्वयन थियो, सामान्यतः जनावर euthanize गर्न प्रयोग पदार्थ.
तथापि, लागूऔषधको यी प्रकार अब मात्र स्थानीय कानूनको द्वारा शासित छन् भनेर औषधि पसल द्वारा उत्पादित गर्दै छन्, बरु संघीय नियामकहरु भन्दा.
एक घोटाले नोभेम्बर मा erupted 2012 मैसाचुसेट्स यी औषधि पसल मध्ये एक मा गरिब स्वच्छता एक घातक मेनिनजाइटिस फैलन को कारण रूपमा दोष थियो.
McGuire यस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका मा कार्यान्वयन गर्न तेस्रो मानिस छ. ओहियो को तीन कार्यान्वयन 39 मान्छे गत वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका मा मृत्युदण्ड, यस अनुसार मृत्यु दण्ड सूचना केन्द्र.
यो लेख, नयाँ कार्यान्वयन दबाइ लिन्छ 10 मिनेट अमेरिकी हत्यारा मार्न, बाट सिन्डिकेट छ एएफपी र अनुमति यहाँ पोस्ट. प्रतिलिपि अधिकार 2014 एएफपी. सबै अधिकार सुरक्षित
59365	8 संयुक्त राज्य अमेरिका
← 10 सरल सुझाव तपाईंको एकाग्रता बढावा चुरोट झनै खतरनाक, अमेरिकी रिपोर्ट यस्तो चेतावनी दिन्छ →